Vista's Colorful Planet: September 2012
Emmanuel ထံမှ ပေးစာ ... (2)
သူပြောတာက ကျုပ်တို့ပိုက်ပြင်သွားရင် ရောက်ဖူးတဲ့ ရပ်ကွက်တစ်ခုရှိတယ် ။
အဲဒီမှာက နိုင်ငံခြားသားတွေနေတာများတယ်။ သူတို့ က တာဝန်နဲ့ဒီနိုင်ငံကို သုံးနှစ်တန်သည် လေးနှစ်တန်သည်လာကြပြီးတော့ ပြောင်းကြတာ ။
အဲလို မပြောင်းခင်ဆို တအိမ်လုံးမှာ ရှိတဲ့ ပိုက်တွေကို စစ်ဆေးပြင်ဆင်ပေးသွားတတ်ကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မလွှဲခင်ပေါ့ဗျာ။
အဲလို အကူးအပြောင်းမှာ လှုပ်ရှားတာ အကောင်းဆုံးပဲတဲ့ ။
သူတို့ က ရက်ပိုင်းမှာ ဒီနိုင်ငံက ပြောင်းတော့မယ့်လူတွေဆိုတော့ ပစ္စည်းပျောက်
ပိုက်ဆံပျောက်လည်း သိပ်တိုင်လား တောလား လုပ်မနေတတ်ကြဘူးတဲ့။
ခပ်သေးသေးနဲ့အလုပ်ဖြစ်မယ့်ဟာမျိုး ဥပမာ လက်ပတ်နာရီ လိုမျိုးပါ့။
လောဘတက်လို့ လည်းမရဘူး ပိုက်ဆံအ်ိတ်ထားတတ်တဲ့နေရာဆိုသိရင် နည်းနည်းနှိုက်ပေါ့ နောက် ရွေထည်နည်းနည်းပေါ့ များများယူလို့ တော့မရဘူး ။
သူတို့ အနေနဲ့ထားလိုက်ပါတော့လေ ရဲတိုင်မနေတော့ပါဘူး
သူတို့ အတွက်က ထားနိုင်ပေမယ့် ကျုပ်တို့ အတွက်တော့ ၁ လစာလောက်မဟုတ်လား၊
အနည်းဆုံး အိမ်ခန်းခရှင်းနိုင်မယ် အစားစားဝစားနိုင်မယ်နွေးနွေးထွေးထွေးနေနိုင်မယ်ပေါ့။
အခုဆို ရတာလေးနဲ့ ဘယ်လောက်အထိ လောက်ငအောင်စားရဦးမယ်မှန်း မသိလို့ 
သူပြောတာကို နားထောင်ရင်းနဲ့ ကျုပ်မျက်နှာတခုလုံးပူထူနေတာပဲ။
နားထဲမှာလည်း သူခိုး ၊သူခိုး နင်ဟာ သူခိုးလို့ အော်သံတွေကြားနေသလိုပါပဲ။
ဒါပေမယ့်အိမ်ပြန်ရောက်တော့ အငယ်ဆုံးမလေး ရဲ့ ချမ်းအေးဆာလောင်နေတဲ့ မျက်နှာလေးတွေ့ အပြီးမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ခိုင်မာသွားတော့ တာပဲ။
ဘယ်အိမ်က ဘယ်နေ့ မှာ ပိုက်စစ်ဖို့ ခေါ်ထားတယ်
ဘယ်သူ့ ကိုတာဝန်ချတယ်ဆိုတဲ့ အချိန်ဇယားတွေ မှတ်တဲ့
စာရေးမနဲ့ ကျုပ်မိတ်ဆွေက ဆွေမျိုးနီးစပ်တော်တာမို့သူ့ ဆီကနေ ကြိုသိရတယ် ။
ကျန်တာတွေ အကျဉ်းချုံးပြောရရင်တော့ အဲဒီလို စစ်ပေးရတဲ့အိမ်ကို ဝင်ခွင့်ရတဲ့ အချိန်မှာ အနေအထား တွေ အထားအသိုတွေ မှတ်ရတယ် ။ နောက် ကိုယ်ဝင်လို့ ရမယ့် တံခါးတခုကို ဖွင့်ရအောင် ဖြစ်ဖြစ် သော့တု ဖြစ်ဖြစ် လုပ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့ဗျာ။
အတွင်းခန်းတံခါးက အတွင်းရောက်မှ ချိတ်တခုခုနဲ့ 
လှည့်ဖွင့်လို့ ရတယ်။ အပြင်ကနေဖွင့်နေတာလူမြင်ရင် မလွယ်ဘူးလေ။
ကျုပ်ကတော့ အောက်ဆုံးထပ် နောက်ဖေးမီးဖိုခန်းတခါးကို သော့ပုံစံယူခဲ့တယ်။
ကျုပ်အလုပ်လုပ်နေတုံးလည်း ဘယ်သူမှ ကြည့်နေတာမဟုတ်တော့
ကျုပ်တို့ ကိုလိုက်ပို့ တဲ့ ကုမ္ပဏီကအယ်လဖွန်ဆိုက အင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်တော့
အိမ်ရှင်မိန်းမနဲ့ သူတို့ ချင်းပြောကြဆိုကြပေါ့။
နောက်မှ မေးကြည့်တော့ သူတို့ က နောက် ၃ ပတ်နေရင်
ကျုပ်မိတ်ဆွေ ရဲ့ အစီအစဉ်အတိုင်း ဒီအိမ်ကို လေ့လာတယ်၊ အဝင်အထွက် ပေါ့။
သူတို့ တမိသားစုလုံးက မနက်ဆို အကုန်ထွက်သွားတတ်တယ် ။
အဖေက ရုံးသွားရင်း ကလေးတွေကို ကျောင်းပို့ ပေါ့ ။
အမေကတော့ နေခင်းလောက်ဆို ဈေးသွားရင်းနဲ့လမ်းလျှောက်ထွက်တယ် ။
အဲဒီ အချိန်ကို ရွေးလိုက်တယ်။သူက ညနေ ၃နာရီမကျော်မချင်းပြန်မရောက်ဘူးလေ။
ကျုပ်တို့ ပိုက်ပြင်ဝင်ပြီး ၁ ပတ်ကျော်မှ စလှုပ်ရှားတယ်။ ဒါမှ သင်္ကာမကင်းမဖြစ်မှာပေါ့။
ဒီလိုနဲ့မီးဖိုခန်းကိုသော့တုနဲ့ ဖွင့်ဝင်တာဘာမှ အခက်အခဲမရှိဘူး။
ကျုပ်ရင်ထဲမှာတော့ ဓါတ်ရထားဝင်ခုတ်နေသလိုပဲ သော့ဖွင့်တာတောင် လက်တုန်နေတယ်။
ကျုပ်မှတ်ထားသလောက်ဆိုရင် အပေါ်ဆုံးထပ်မှာ အိပ်ခန်းတွေရှိတယ် အဲဒီမှာ တခုခုရနိုင်မယ်။
မရလည်း ရတာပေါ့ဗျာ ဝင်လာပီးမှတော့ လက်ချည်းမထွက်တော့ဘူးမဟုတ်လား။
ကျုပ်က မျက်နှာကို ခေါင်းစွပ်နဲ့ စွပ်လိုက်တယ် အဲခေါင်းစွပ်ကမျက်လုံးပဲဖော်ထားတာ။
တကယ်လို့ တယောက်ယောက်တွေ့ သွားလည်း မမှတ်မိနိုင်တော့ဘူးပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ အပေါ်ထပ်ကို တဖြည်းဖြည်းတက်လာတာပေါ့ ။
ဒုတိယထပ်မှာ အခန်း၂ခန်းရှိတယ် နောက်မှကြည့်မယ်ဆိုပြီး
အပေါ်ဆုံးထပ်ကို အရင်တက်တယ်။အပေါ်ဆုံးထပ်က ပင်မအိပ်ခန်းရှိတာကိုး ၊
ဟိုနေ့ က အဲဒီက ပိုက်ဆို့ နေလို့ ကျုပ်ပြင်ပေးရသေးတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ပင်မအိပ်ခန်းတခါးဘုကို လှည့်ဖွင့်လိုက်တော့
အဆင်သင့်လိုက်တာ သော့မခတ်ထားဘူး ။
ဒါပေမယ့်ကျုပ်မဝင်ရဲဘူး တံခါးလက်ကိုင်ဘုကို ဆုပ်ထားပြီး တွန်းမဖွင့်ဘဲကြောင်နေသေးတယ် ၊
လုပ်နေကြမှ မဟုတ်တာ ပြီးတော့ ရင်ထဲမှာ ဗလောင်ဆူနေတယ်။
ကျုပ်အရဲကိုးပြီး တွန်းဝင်လိုက်တယ် ။မှန်တင်ခုံက အံဆွဲတွေ ဖွင့်ကြည့်တယ်။
ကံအားလျှော်စွာနာရီတွေတွေ့ တယ် ရိုးလက်စ် တလုံး၊စီတီဇင်တလုံး ။
ရိုးလက်စ်တလုံးဆို အတော်အဆင်ပြေပြီ တခြားဟာတောင်ယူစရာမလိုတော့ဘူး ။
၂ လုံးစလုံးတော့ယူလို့ မဖြစ်ဘူး အထားမှားလို့ ပျောက်သလိုလိုလည်း လုပ်ရမှာကိုး ။
အဲအချိန်မှာပဲ ကျုပ်ကို တယောက်ယောက်က နောက်ကနေကြည့်နေသလို ခံစားမိလိုက်တယ်။
မျက်လုံးလေး ၂လုံးနဲ့ စိုက်ကြည့်နေတဲ့ ကလေးမတယောက်ကိုတွေ့ ရတယ် ။
အိမ်ရှင့်ကလေး အငယ်ဆုံးလေးထင်တယ် ။ ၁၂ နှစ်လားမသိ ဒီ့ထက်ကြီးချင်လည်း ကြီးမှာပေါ့။
သူတို့့အရှေ့ တိုင်းသားတွေက ကျုပ်တို့ လိုလူကောင်သိပ်မထွားဘူး မဟုတ်လား။
ကလေးမက နဖူးပေါ်မှာဆံပင်နက်ကလေးအတိဖြတ်လို့ အနောက်ကဆံပင်တွေကလည်း
ကျောလယ်တောင်ကျော်မလားဘဲ ။ သူလေးက ခဏကြောင်နေတယ် နောက်မှ တခါတည်း ဆင်းပြေးတော့တာပဲ ။ ကျုပ်လည်း အဲဒီတော့မှ သတိဝင်လာတယ် သူ့ ကိုတားရမယ် ။
ရဲကိုဖုန်းဆက်တာနဲ ဧည့်ခန်းကလုံခြုံရေးအလန်း ကို နှိပ်တာနဲ့ ကျုပ်ဘဝ ဆုံးပြီ။
ကျုပ်ဘဝဆုံးရင် ကျုပ်နောက်က တမိသားစုလုံး၊ ဥမမယ် စာမမြောက် ကလေး၃ ယောက် ၊ နာတာရှည်ကျုပ်ဇနီး အကုန်ဘဝဆုံးမှာ။ သူ့ ကို တားရမယ် ။ ကျုပ်ပြေးလိုက်တယ် ။
ကျုပ်ကိုယ်လုံးက ကြီးကြီး လှေကားက သေးသေးနဲ့ မနည်း ဆင်းလိုက်ရတယ်။သူလေးက ပြေးတာလှစ်နေတာပဲ။
သူက ဧည့်ခန်းကို ပြေးတယ် အလန်းနား ကို ပြေးတာ လူလည်ကလေး ၊
ကျုပ်က လှေကားထစ်ကို မဆင်းတော့ပဲ ခုန်ချလိုက်တယ် သူ့ နားတန်းရောက်တာပေါ့ ။
သူ့ ပုခုံးလေးဖမ်းလို့ မိကာနီးမှာ မီးဖိုထဲကို လှစ်ကနဲပြေးပြန်တယ် ကျုပ်ကလည်း ပြေးလိုက်ရတာပေါ့ ။
Labels: Story4comments | Links to this post
Emmanuel ထံမှ ပေးစာ ...
ခင်ဗျား ဒုစရိုက်တခုခုလုပ်ခဲ့ဖူးလား? ။
ဟဲဟဲ အခုလို အရက်သောက်တာမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။
ဥပဒေနဲ့ မလွတ်တာမျိုး ခိုးတာ တိုက်တာမျိူးကိုပြောတာ။
ဘယ်ကလာ ကြံတောင် မကြံစည်ဘူးဟုတ်လား။
ဒါပေမယ့်ပေါ့လေ ကိုယ့်ရင်သွေးလေးတွေ အတွက်ကျတော့ တမျိုးဖြစ်ရတော့မှာပေါ့။
သူတို့ လေးတွေ ငတ်လို့ သေတော့မယ်၊ အပူပေးစက်မဖွင့်နိုင်လို့အေးလွန်းလို့
တုန်နေတယ် ဆိုရင်တော့လည်း လုပ်သင့်လုပ်ရမှာပေါ့။
ကျုပ်ကတော့ ကျုပ်ကလေးလေးတွေလက်ချောင်းခြေချာင်းလေးတွေအအေးလွန်လို့ 
ယောင်ကိုင်းနေတာ မြင်ရတာရင်ထဲမှာ မချိပါဘူး။
ကိုယ်သာ အငတ်ခံမယ် ကိုယ့်ကလေးတွေတော့ မငတ်စေချင်ဘူးဗျာ။
ခုက ကြုံတုံးလေး ခင်ဗျားကို ကျုပ်ငယ်ငယ်က အကြောင်း ပြောပြချင်လို့ ။
ကျုပ်ငယ်ငယ်တုံးက ခြံသမား လယ်သမားသားပေါ့။
ဒီနယ်မှာပဲ အဖေနဲ့ အမေက ပန်းသီးတွေစိုက်နွားတွေမွေးတယ်ပေါ့။
အဖေက ခြံတချို့ ပိုင်တယ်။
ကျုပ်လား အဲဒီတုံးက ခေတ်ပညာလေး မတောက်တခေါက်နဲ့ ဘဝင်မြင့်ချင်ချင် အကောင်လေးပေါ့။ လယ်သမားသား လယ်သမား ပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးကိုတော်လှန်ချင်တဲ့ ဥာဉ်လေးနဲ့ ချာတိတ်ဘဝမှာ မြို့ တက်လာတာပေါ့ ။
အဖေနဲ့ အမေက လယ်ကိုဦးစီးစေချင်တယ် ကျုပ်က တောမှာ တသက်လုံးမနေချင်ဘူး။
ကျုပ်ရည်မှန်းချက်က မြို့ မှာချမ်းသာတဲ့ စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ချင်တာ ။
အမေနဲ့ အဖေက ဘယ်လို တားတား မရဘူး။
နောက်ဆုံးတော့ အဖေက စိတ်ဆိုးလွန်းလို့ မင်းဘဝနဲ့ မင်းရှိပစေ
ပြန်မလာနဲ့့လို့ နှင်ချလိုက်တယ်လေ။
ကျုပ်လား အဲတုန်းကတော့ ဘဝင်လေဟပ်နေတုံးကိုး တခါတည်းဆင်းလာတာပေါ့။
အဖေ့အကြောင်းလည်း ကျုပ်သိတယ် ဘူးဆို ဖရုံမသီးဘူး။
ဒီလိုနဲ့ မြို့ တော်ကိုတက်လာ စားသောက်ဆိုင်တွေနားရစ်သီရစ်သီလုပ်နေရင်းနဲ့ 
ဘာ စားပွဲထိုးဟုတ်လား။ ?
ဘယ်ကလာ ကျုပ်က ငယ်ငယ်ထဲက လူကောင်ကကြီးကြီး နဲ့မီးဖိုထဲမှာပဲ အလုပ်ရတာပေါ့ဗျာ။
ကျုပ်အလုပ်သွား တောင်းတဲ့ ဆိုင်တိုင်းက ကျုပ်ကိုကြည့်ပြီး တောသား အိုးတိုးအတ
လူကောင်ကလည်း ကြီးသေး ဆိုင်ထဲမှာ သူသာ စားပွဲထိုးလိုက်ရင်
အကုန်ဝင်တိုက်မှာပဲဆို ပြီး ရီကြသေးတယ်။ ကျုပ်ကလည်း ချေးမများပါဘူး။
စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင် အစ မီးဖိုချာင်ကလို့ ယူဆထားတာကိုး ။
ကျုပ်က မီးဖိုထဲမှာ တောက်တိုမယ်ရလုပ်ရတယ်။
ပန်းကန်ဆေး ဟင်းအမာထည်တွေ ခုတ်ပေါ့ ။
ဆယ်လမွန်လို ငါးမျိုးများ တော့ အနားတောင်မသီရပါဘူး ။
ဒါက ကျွမ်းကျင် အဆင့်တွေကိုင်တာကိုး။
အဲဒီမှာ ကျုပ်မိန်းမဖြစ်လာမယ့် မိန်းကလေး ကို သွားတွေ့ တာပဲ။သူက စားပွဲထိုးလေ ။
သူက မိဘမဲ့ ကိုယ့်ဝမ်းကိုကျောင်းနေရတာ။
ဒီလိုနဲ့အတိုချုံးရရင် သူနဲ့ ကျုပ်အကြောင်းဆက်ပေါင်းဖက် လိုက်တာ
ကလေး ၃ယောက်မွေးရော ဆိုပါတော့။ ကျုပ်က စားသောက်ဆိုင် ပိုင်ရှင်လည်း မဖြစ်သေးတဲ့အပြင် ၃ ယောက်မြောက်သမီးလေး မွေးပြီးတော့ မိန်းမက ကျန်းမာရေးချို့ တဲ့လာလိုက်တာ
ခဏခဏ နေမကောင်းဖြစ်တတ်တော့ ဘယ်သူမှ အလုပ်မခန့် ဘူးဖြစ်လာတာလေ။
တမိသားစုလုံး စားဝတ်နေရေးက ကျုပ်အပေါ်မှာ တည်နေတော့တာပေါ့။
ကျုပ်က ဒုတိယ ကလေးမွေးထားပြီးကတည်းက ဝင်ငွေလုံလောက်အောင် စားသောက်ဆိုင်က အလုပ်အပြင် ပိုက်ပြင်တဲ့ အလုပ်ပါတွဲလုပ်ရတယ်။ ကျုပ်မိန်းမ အလုပ်ကလည်းမလုပ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာ ကလေးကလည်း ၃ ယောက်ဆိုတော့ အတော်ကျပ်တည်းတာဗျာ။
ဒီအချိန်မှာတော့ ကျုပ်တော ကို သိပ်သတိရတာပဲ ။
တော မှာ သာဆို ကျုပ်မိန်းမ အပင်လေးတွေစိုက် ၊ အကောင်လေးတွေ မွေးနဲ့နေလို့ ရတယ်။
နွားနို့ သောက်ချင် နွားမတွေဆီကရတယ် ၊ အနည်းဆုံး အာလူးပြုတ်တော့ မငတ်ဘူးဗျာ ။
ခုတော့ မြို့ မှာ အားလုံး ဟာ ငွေမှ ငွေ၊ ငွေနဲ့ အကုန်စက်နေရတာကလား။
တောမှာ ထင်းခုတ်ပြီး မီးလှုံရင် အနွေးဓါတ်ရနိုင်ပေမယ့် မြို့ မှာက လတိုင်း ပိုက်ဆံသွင်းနိုင်ပါမှ နွေးတာကိုး။
နှာခေါင်းပေါက်လောက် အခန်းလေးထဲ စုပြုံနေရ၊ ရေလိုလည်း ငွေ မီးလိုလည်းငွေနဲ့။
ခင်ဗျားကို ပြောရအုံးမယ် အရင်က ကျုပ်ထင်တာက စီးပွားပျက်ကပ်ဆိုတာ
သူဌေးတွေနဲ့ ပဲဆိုင်တာလို့၊ အမှန်တော့ မဟုတ်ဘူး သိလား ။
ကျုပ်တို့ ဆင်းရဲသားတွေနဲ့ သာ လုံးလုံးသက်ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စပဲဗျ။
သူဌေးတွေ က စီးပွားပျက်မသွားဘူး အမြတ်လျှော့ သွားတာပဲရှိတာ။
ကျုပ်တို့ လိုဆင်းရဲသားတွေသာ စီးပွားပျက်တဲ့အပြင် ဘဝပါပျက်ကြရတာ။
ကျုပ်တို့ မိသားစုမှာ ကျပ်တည်းပါတယ်ဆိုမှ စီးပွားပျက်ကပ်ဆိုလားဖြစ်လို့အလုပ်သမားတွေလျှော့တယ်ဆိုပြီး စားသောက်ဆိုင်ကနေ ကျုပ်ကို ထုတ်လိုက်တယ်လေ။
ဘယ်လို မှ တောင်းပန်လို့့မရပါဘူးဗျာ။
နောက်ဆုံး ပိုက်ပြင်တဲ့ အလုပ်ပဲ ကျန်တော့တယ်။
အဲဒီ အလုပ်ကလည်း နောက်တပတ်နေတော့ အသံစပေးလာပြီလေ။
ကံဆိုးမှုဆိုတာ စုပြုံလာတတ်တာကိုးဗျ။ အဲဒီတုံးက ကြုံရတဲ့ ဆောင်းတွင်းကလည်း
ကျုပ်တသက် အဆိုးဆုံးထင်ပါရဲ့ ဗျာ။ပိုက်ဆံမပေးနိုင်တော့ ကျပ်တို့ အခန်းလေးထဲ အနွေးဖြတ်ထားတာလည်းကြာလှပါပြီ။ အိမ်ရှင်ကလည်း အိမ်ခန်းခ တောင်းမရတဲ့ အဆုံးမှာ လကုန်ရင် ဆင်းပေးဖို့ ပြောလာပြီ။ သူ့ ကိုလည်း အပြစ်မတင်ပါဘူး သူလည်း အိမ်ခန်းငှားစားနေရတဲ့ မုဆိုးမကိုး။ ကျုပ်တို့ လို အခန်းခ မပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့လူတိုင်းအကြွေးနဲ့တင်ထားရရင် သူလည်းဘာနဲ့ သွားစားမလည်း။
အဲဒီ တုန်းကများဆို ကျုပ်ခေါင်းတွေ ပေါက်ကွဲထွက်တော့မတတ်ပါဘဲဗျာ။
အခုတောင် ပိုက်ဆံမပေးနိုင်လို့ အေးစက်နေတဲ့ ကျုပ်တို့ အခန်းထဲမှာ သားအမိသားအဖတွေ စုပြုံနေကြရတာ။ တယောက်ကိုတယောက်ဖက်လို့ စောင်တွေနဲ့ ထွေးလို့ ပေါ့။ ဒါတောင် အငယ်မလေးဟာ ခြေထောက်လေးတွေယောင်လိုက်လာတာ .. သူ့ ဖိနပ်လေးတောင် မစွပ်နိုင်ရှာတော့ဘူး။ ဒီအခန်းကသာ ဖယ်ပေးလို့ လမ်းဘေးရောက်ရင် ဘယ်လိုဖြစ်ကြမလဲ။
သူလေးတော့ သေမှာပဲ လို့ တွေးမိတိုင်း ရင်ထဲကို စူးချွန်နဲ့ ထိုးသလိုပါပဲလေ။
ဒါနဲ့တနေ့ တော့ ပိုက်ပြင်သွားရင်းနဲ့ကျုပ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တယောက်ကို ပြောပြမိတယ်လေ။
အဲဒီမှာ သူက အကြံပေးတော့တာပဲ။ သူလည်း ကျုပ်နဲ့ အတူတူ နဲ့ အနူနူပဲ။
သူက တော်သေးတာက ကလေးတယောက်ပဲရှိတယ် မိန်းမကလည်း အလုပ်လုပ်နိုင်တယ် ။
ဒါတောင် ကလေး အသည်းအသန်ဖျားတုံးက ဆေးဖိုးလို တော့ ဒီလိုလုပ်ခဲ့တာပဲတဲ့။
ဘယ်သူမှလည်း မရိပ်မိဘူးတဲ့ ၊အခုဟာက ကျုပ်အရမ်းအခက်တွေ့ နေတာရယ် သူရောကျုပ်ရော နောက်အပတ်ထဲမှာ ပိုက်ပြင်ကုမ္ပဏီကနေ လူလျှော့ခံရတော့မှာသေချာသလောက်ရယ်မို့ ပြောပြတာတဲ့။
အခွင့်အရေးရတုံးလှုပ်ရှားရတဲ့ ကိစ္စမို့ လို့ တဲ့ ။
သူလည်း ဒီအပတ်ထဲ ထပ်လုပ်ဖို့ တွေးထားတယ်တဲ့။
ကျုပ်လေ ခေါင်းတွေ ကြီးသွားလိုက်တာများ၊ တသက်တခါ မကြံစည်ဘူး ပါဘူးဗျာ။
တသက်လုံးကိုယ့်လုပ်အားနဲ့ ကိုယ် စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ရမယ်
လို့ မျှော်မှန်းထားတဲ့ကောင်က အခုတော့ ဒုစရိုက်သမားဖြစ်ရတော့မှာလား။
Labels: Story6comments | Links to this post